DJ Video Loop Two (Ocean) - NYE Countdown yeJs, Vjs, Nightclubs 2019
musha / Specials Products / DJ Video Loop Two (Ocean)
Vhidhiyo Dj - zita rakagadzirirwa uye logo rinosvika kutamba paVJ yako mavara kana iwe usina vhidhiyo yenziyo yauri kutamba. Tora chikwata chako nguva dzose nekupfuura uye kupfuura pane kuva nekkuta. Zvose zvinoshandiswa. Kwete audio. (asi mutinzwi izwi / mimhanzi mubhedha rinogona kuwedzerwa kana zvichidiwa)
Nezvenyanzvi djs, nightclub, mahoteli, mahotera nekakinos chete.
Kubva kuvakadzi veNYECOUNTDOWN.com